Semalt को साथ सामग्री गैप विश्लेषण आयोजन
हामी प्राय जसो सामग्री गॅप विश्लेषण के हो भनेर सोधिन्छ र हामी यसको बारेमा कसरी जान्छौं। खैर, यस लेखमा, हामी ती सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछौं। पहिलो बन्द, सामग्री खाली ठाउँ विश्लेषण महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले हामीलाई अवसरहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ जुन हामीले हाम्रो सम्बन्धित ग्राहकहरूको लागि हाम्रो एसईओ रणनीतिहरूमा छुटाउन सक्छौं। यी अन्तरहरू विश्लेषण गरेर हामी यी रणनीतिहरूलाई परिमार्जन गर्न र सुधार गर्न सक्दछौं ताकि हाम्रा ग्राहकहरू सँधै उत्तम एसईओ सेवाहरूको बारेमा गर्व गर्न सक्दछन्।
एउटा प्रश्न हामी पूर्ण रूपमा निश्चित छौं तपाईंले आफैलाई सोध्नु हुन्छ कि कसरी Semalt लाई वेबसाइटमा के लेख्ने थाहा छ। ठिक छ, यो Semalt ले यसको साइटमा लेख्ने सामग्री वा हामीले हाम्रो ग्राहकहरूको लागि लेख्ने सामग्रीलाई बुझाउन सक्छ। जे भए पनि, यो केहि रहस्य देखिन्छ, विशेष गरी किनभने हामी धेरै महत्त्वपूर्ण SEO सम्बन्धित मुद्दाहरूको छलफल गर्दछौं।
एउटा तरिका हामी सही शीर्षकहरू फेला पार्छौं SEO कुञ्जी खोज अनुसन्धानबाट। यो प्राय: सबै भन्दा बढि प्रेसिंग मुद्दाहरूको सामना गर्न लामो यात्रा गर्दछ जुन तपाईंको वेबसाइटमा पाठकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। तर के तपाईं कहिलेकाँही सोच्नुहुन्छ कि यदि ती सबै तपाईंको वेबसाइटको लागि सही सामग्री फेला पार्नको लागि हो भने? के हुन्छ यदि तपाईं अन्य आकर्षक एसईओ अवसरहरू गुमाउँदै हुनुहुन्छ?
यो जहाँ सामग्री अन्तराल विश्लेषण प्रदर्शन गर्नु तपाईंको सामग्री रणनीतिमा यी "अन्तर" फेला पार्न स्मार्ट तरीका हो। यसले हामीलाई नयाँ यातायात र रणनीतिक सामग्री विचारहरू पत्ता लगाउँन मद्दत गर्दछ थप ट्राफिकमा तान्नका लागि। हामी थप क्लिकहरू रूपान्तरण गर्न र तपाइँको दर्शकहरूलाई बढी धनी सामग्री प्रदान गर्न पनि प्राप्त गर्छौं।
यहाँ हामी कसरी वर्णन गर्छौं कि हामी कसरी सामग्री गैप विश्लेषण गर्छौं र तपाईंको सामग्री रणनीति अडिट गर्नेछौं र तपाईंको समग्र वेबसाइटको एसईओ सुधार गर्नेछौं।
सामग्री गैप विश्लेषण के हो?
सामग्री अन्तराल विश्लेषण तब हुन्छ जब हामी एक वेबसाइटको अडिट गर्छौं र यसको सामग्रीमा अवस्थित प्वालहरू वा खाली ठाउँहरू पाउँछौं। यस प्रक्रियाको बखत, हामी हराइरहेका सामग्री टुक्रा पहिचान गर्छौं जुन तपाईंको लक्षित दर्शक रूपान्तरण फनेलको एक विशेष चरणको साथ पign्क्तिबद्ध गर्न सक्छ र गर्नुपर्दछ।
हामी तपाईको सामग्रीलाई ती क्षेत्रहरू पत्ता लगाउनको लागि विश्लेषण गर्छौं जहाँ तपाईले मूल्यवान सम्पत्ति हराउन सक्नुहुन्छ जुन ग्राहकलाई क्लिकमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक पर्दछ। सामग्री अन्तर विश्लेषण प्रक्रियाको बखत, हाम्रो लागि नयाँ कीवर्ड अवसरहरू पत्ता लगाउन हाम्रो लागि सामान्य छ जुन तपाईंको वेबसाइटले हाल अवस्थित सामग्रीको फाइदा लिइरहेको छैन।
जब एक सामग्री अन्तर विश्लेषण प्रदर्शन गर्दै, हामी तपाईंको अडिट गर्छौं:
सामाजिक मिडिया सामग्री
डाउनलोडयोग्यहरू र ईबुकहरू
र सामग्रीको रूपमा अन्य सम्पत्ति
हामी विश्वास गर्छौं कि यो विश्लेषण चलाउनु तपाईंको सामग्रीमा प्वालहरू फेला पार्न आवश्यक छ जुन तपाईं ग्राहकहरूलाई हराउनुहुन्छ। एकचोटि हामीले अडिट गरिसकेपछि, हामी यी प्वालहरू भर्दछौं र क्लिकहरूलाई ग्राहकमा रूपान्तरण गर्न सजिलो बनाउन सक्छौं, जसले निश्चित रूपमा हाम्रो ग्राहकहरूको अनुहारमा मुस्कान राख्नेछ।
तपाईंको सामग्री क्रेताको यात्रामा म्यापिpping गर्दै
तपाईं यो सुन्न चाहनुहुन्न; जहाँसम्म, तपाइँको वेबसाइट मा आउने हरेक आगन्तुक तयार छैनन् वा तपाइँको उत्पादनहरू किन्न जाँदैछन्। यी आगन्तुकहरू प्रायः जानकारीको लागि खोजी गरिरहेका हुन्छन्, र उनीहरूले राम्रो शपिंग समाधान प्राप्त गर्न उनीहरूका विकल्पहरू र मूल्यहरूको तुलना गर्न भेला हुन सक्ने जानकारी प्रयोग गर्दछन्।
तपाईंको वेबसाइट प्रबन्धकहरू र सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूको रूपमा, हाम्रो उद्देश्य खरीददारको यात्राको प्रत्येक चरणको लागि सामग्री सिर्जना गर्नु हो, चाहे यो समस्या-जागरूक, समाधान-सचेत, वा अन्तिम चरणको हो, जुन विन्दु हो जहाँ ग्राहकले खरीद निर्णय लिन्छ। ।
धेरै ब्रान्डहरूले उनीहरूको लक्षित दर्शकहरु कोर्न को लागी ब्लग पोष्ट को रूप मा जानकारीमूलक सामग्री को निर्माण गर्न उत्कृष्ट रणनीतिहरु बनाएको छ। उनीहरूसँग पनि महान "पैसा" पृष्ठहरू छन्, जसले ती आगन्तुकहरूलाई खरिदकर्तामा रूपान्तरण गर्ने काम गर्छन्। यद्यपि त्यहाँ एक अन्तर छ। धेरै ब्रान्डले विचार गर्न असफल हुन्छ कि केहि आगन्तुकले अझै बिभिन्न विकल्पहरुमा विचार गरिरहेछन्, र किनकि उनीहरूसँग मद्दतको लागि कुनै सामग्री छैन, तिनीहरू क्र्याकबाट खस्न सक्छन्।
जब सामग्री फाँट विश्लेषण सञ्चालन गर्छौं, हामी पहिले पहिचान गर्छौं कि वेबसाइटमा ग्राहकको यात्राको बिभिन्न चरणहरूको सामग्रीहरू छन् कि छैनन्।
यस पृष्ठले लक्षित कुञ्जी शब्दहरू जुन लक्षित दर्शकहरू द्वारा सामना गरिएको समस्यामा सिधा सम्बन्धित छ। यी पृष्ठहरूमा सामग्री यी समस्याहरूको समाधान प्रदान गर्दछ र समस्याको अर्थ के हो र हामी यसलाई कसरी समाधान गर्न सक्छौं भन्नेमा मूल्यवान जानकारी प्रदान गर्दछ। जागरूकता पृष्ठहरू महत्त्वपूर्ण छन्, तर तिनीहरू तुरून्त ग्राहकहरूलाई ग्राहकमा रूपान्तरण गर्दैनन्।
यो विन्दु हो जहाँ दर्शकहरूले उनीहरूका समस्याहरूको लागि विभिन्न समाधानहरू तुलना गरिरहेका छन्। यहाँ तिनीहरू लेखहरूमा विचार गर्दछन् जसमा "सर्वश्रेष्ठ-को," "गाइड," वा "कसरी-कसरी" वर्णनहरू छन्। तपाईंको पाठकहरूलाई यस चरणमा राख्नको लागि, हामी यस्तो सामग्री सिर्जना गर्छौं जुन तपाईंको सेवाहरू र उत्पादनहरूलाई तपाईंको प्रतिस्पर्धाको तुलना गर्दछ र हाइलाइट गर्दछ किन तपाईं उत्तम विकल्प हुनुहुन्छ। वा हामी सामग्री सिर्जना गर्न सक्दछौं जुन तपाईंको ब्रान्ड धेरै समाधानहरूमा एक हो।
यो विन्दु हो जहाँ तपाइँ श्रोतालाई खरीद निर्णय लिन सहमत गर्नुहुन्छ। यी पृष्ठहरू तपाईसँग बिक्री पृष्ठहरू, सेवा पृष्ठहरू, इत्यादि हुन्। ती एक अन्तिम आगन्तुकको रूपमा सेवा गर्छन् कुनै आगन्तुकले तपाईंलाई खरीद गर्न वा सम्पर्क गर्नु अघि। यी पृष्ठहरू जागरूकता र विचार सामग्री भन्दा पनि तपाईंको ब्राण्ड प्रचार गर्नका लागि बनाइएको हो।
यी क्रेताको यात्राको अन्तिम चरणहरू हुन्, जहाँ सामग्रीहरू खरीदकर्ताहरूलाई आश्वासन दिन सिर्जना गरिन्छ कि उनीहरूले उत्पादनहरू र सेवाहरूबाट अपेक्षित परिणामहरू प्राप्त गर्नेछन्। यो एक धन्यवाद पृष्ठ वा एक अनुवर्ती ईमेल सदस्यता हुन सक्छ जुन खरीदकर्ताहरूलाई समर्थन टोली वा डेस्कसँग जोड्दछ, जसले उत्पादन वा सेवाहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा सहयोग प्रदान गर्दछ। वा यो पृष्ठ हुन सक्छ जुन ग्राहकको समीक्षा वा टिप्पणीहरूको लागि सोध्छ।
G चरणहरू सामग्री गैप विश्लेषण गर्नका लागि
सामग्री खाली ठाउँ के हराइरहेको छ हेर्न को लागी पोष्टिंगको माध्यमबाट मात्र कम्बिंग बाहिर जान्छ। यसले तपाईंको सामग्रीमा खाली ठाउँहरू पत्ता लगाउन र यी प्वालहरू भर्नको लागि उचित सामग्रीहरू बनाउने चरण चरण चरण समावेश गर्दछ।
हामी कसरी गर्छौं भन्ने कुरा यहाँ छ:
खरीददारहरूको यात्रा म्यापि Out गर्दै
यहाँ हामी एक आधारभूत प्रश्नको उत्तरहरू प्रदान गर्दछौं, "पोइन्ट ए देखि बीसम्म पुग्दा लक्षित श्रोताहरूले के लिने अपेक्षा गर्दछौं?" हामी लक्षित दर्शकहरूले पाउन सक्ने प्राथमिक प्रश्नहरू विकास गर्न समय निकाल्छौं, उनीहरूले विचार गर्न सक्ने विभिन्न विकल्पहरू, उनीहरूले किन किन्नु अघि के हेर्न आशा गर्छन्, कुन फोनमा उनीहरूलाई प्रतिक्रिया गर्ने सम्भावना हुन्छ र अरू धेरै।
यस चरणमा हाम्रो लक्ष्य यसको सेवाहरू र उत्पादनहरूमा आधारित प्रत्येक व्यवसायको लागि दर्शकहरूको यात्राको नक्शा बनाउनु हो।
बजार अनुसन्धान सञ्चालन गर्दै
तपाईंको दर्शकहरू के चाहन्छन् भन्ने सब भन्दा राम्रो तरिका भनेको उनीहरूलाई सोधेर हो। बजार अनुसन्धान सर्वेक्षण सञ्चालनले हामीलाई सिधा दर्शकहरूबाट सिक्न र उनीहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू, इच्छा, आवश्यकताहरू, लक्ष्यहरू, आदि पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ। हामी अझ राम्रो वेबसाइट सामग्री रणनीतिहरू विकास गर्न यस सर्वेक्षणबाट प्राप्त फीडब्याक्स प्रयोग गर्दछौं।
एउटा उपकरण तपाई यसका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ गुगल फारमहरू। यो एक सरल र अज्ञात सर्वेक्षण सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन हामी लक्षित दर्शकहरूलाई पठाउन सक्छौं। केहि प्रश्नहरू जुन सबै उद्योगहरूमा सामान्य हुन्छन्:
केहि उत्पाद वा सेवा को बारे मा तपाईको सरोकार के हो?
तपाइँ कुन उत्पादन वा सेवाको बारेमा सबैभन्दा संघर्ष गर्नुहुन्छ?
तपाईलाई के लाग्छ उत्पादन वा सेवा सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ?
कुन कारकहरू छन् जसले तपाईंको निर्णयलाई प्रभाव पार्छन् कुन उत्पादनहरू वा सेवाहरू खरीद गर्न?
हाम्रो सर्वेक्षणबाट प्राप्त प्रतिक्रियाले मूल्यवान सामग्री विचारहरू प्रदान गर्दछ जुन हामी वेबसाइटमा लागू गर्न सक्छौं।
वेबसाइटमा सामग्री विश्लेषण गर्नुहोस्
जबकि एक ब्राण्डले धेरै प्लेटफार्महरुमा सामग्री साझेदारी गर्दछ, हामी यो सुनिश्चित गर्छौं कि वेबसाइटमा नै चित्रित सामग्री एक खरीददारको यात्राको बिभिन्न चरणहरूसँग पign्क्तिबद्ध हुन्छ, सम्भावित ग्राहकहरूको भित्रबाट कुनै अन्तर नछोडी। हामी सबै यूआरएलहरूको लागि तपाइँको वेबसाइट मार्फत क्रॉल र निर्धारण गर्दछौं कि कसरी तिनीहरूले सबै चरणहरूमा ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू पर्याप्त मात्रामा पूरा गर्दछन्।
हामी वेबसाइट वा यूआरएलको लागि निर्धारण गरिएको कुञ्जी शब्दहरू हेर्नका लागि उपकरणहरू प्रयोग गरेर वेबसाइट विश्लेषण गर्न सक्दछौं। हामीले अन्य कुञ्जी शब्दहरू पनि फेला पार्‍यौं जुन वेबसाइटको लागि श्रेणीकरण हुन सक्छ तर होईन। हामी यो अवसरको लागि प्रत्येक यूआरएलको कुञ्जी शव्दहरूलाई अधिकतम बनाउन र सामग्री फनेललाई सुदृढीकरण गर्न प्रयोग गर्दछौं।
तपाईंको प्रतिस्पर्धी सामग्री विश्लेषण गर्नुहोस्
हामीले पत्ता लगायौं कि तपाईंको विपक्षीलाई हराउने एउटा तरिका तपाईंको विपक्षीलाई चिन्नु हो। प्रतिस्पर्धाले के गरिरहेको छ भनेर बुझेर, हामी यसलाई तपाईंको सामग्रीसँग तुलना गर्न सक्छौं र हेर्नुहोस् कि यसले कसरी मापन गर्दछ। त्यस्ता तुलनाहरूले प्रायः खाली ठाउँहरू खुलासा गर्दछ जुन हामी भर्न सक्छौं। यदि तपाइँको प्रतिस्पर्धीको फनेल तपाइँसँग मिल्दो छ भने हामी अध्ययन गर्दछौं कि उनीहरूले कसरी एक चरणबाट अर्को चरणमा आगन्तुकहरूलाई नेतृत्व गर्छन् र अझ राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्न राम्रो तरिका विकास गर्दछन्।
जस्तै कम्पनी भएको Semalt तपाईको कुना मा वास्तव मा धेरै व्यवसायहरु को लागी एक राहत छ। त्यो किनभने हामी यस्तै कार्यहरू लिन्छौं, जबकि व्यवसाय र उद्यमीहरू उनीहरूको व्यवसाय बढाउनको अन्य पक्षहरूमा ध्यान दिन्छन्। एक कम्पनी को रूपमा, हामी तपाइँका सबै SEO चुनौतिहरू लिन्छौं र तपाइँको SEO समस्याहरूको दृश्यात्मक र दिगो दिगो समाधानहरू प्रदान गर्दछौं।
सेवाहरूको साथ जुन एसईओ अप्टिमाइजेसन देखि वेब प्रबन्धन सम्म, तपाईं उत्तम वेबसाइट हेरचाह पाउनुहुन्छ। साथ साथै सामग्री र टेक्निकल SEO दुवैको लागि अनुभवी पेशेवरहरूको टोली पनि विकसित गरियो।